Yonwabela iRockingham ngokwesitayile - I-Airbnb
Yonwabela iRockingham ngokwesitayile
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLiam
Ulwandle lwaseRockingham luphumelele ibhaso, kwaye lonwabe kakhulu ekutshoneni kwelanga. Kukho ukutya okugqwesileyo kunye nesiselo kwi-cafe kunye ne-waterfront terraces. Kuninzi okubonayo nokwenza kwindawo engasemanzini, nokuba kukuqubha, ukuntywila emanzini kunye nokubona ihlengesi okanye ukuntywila kwi-scuba. Uhambo lwemini: Isiqithi sasePenguin, ukhenketho lwewayini; I-Peel Winery Estate. Indawo yokuhlala yokuhlala ilungele iinyanga ezi-3 ukuya kwixesha elide leshishini okanye iholide, kunye ne-intanethi enesantya esiphezulu kunye nedesika yomsebenzi; ibhalansi enempilo yomsebenzi kunye nokuphumla kwindawo ekhululekile.
Iinyanga ezi-3 ukuya kwixesha elide lokuhlala.
Kuphela yi-300m ukusuka kunxweme oluphumelele ibhaso kwi-Rockingham foreshore, le ndlu ikwiAzure Beachside Apartments. Ngengqwalasela yayo kwiinkcukacha kunye nezibonelelo ezigqwesileyo, ifaneleka ngokufanelekileyo kumhambi weshishini kodwa ixhotyiswe kakuhle ukuhoya naluphi na undwendwe olujonge ukuphumla kule ndawo itofotofo.
Le ndlu yeyangoku, isikelelwe ngeembono ezimangalisayo zepaki kunye nolwandle, incediswa ngokukhazimla okugcweleyo kobude kunye nophahla olunesisa.
Qubha echibini apha phambi kokuba uqalise usuku lwakho okanye uye ezantsi kwi-foreshore ukuze uhambe kancinci ukukhupha uxinzelelo. Emva kwexesha, mhlawumbi uphumle kwigumbi elinefanitshala ekhululekile kunye ne-wi-fi enesantya esiphezulu. Ekupheleni kosuku, ibhedi etofotofo ilindele abo bazimisele ngokulala kamnandi ebusuku: ibhedi enye ukumkanikazi.
Indawo yethu inawe kanye entliziyweni ye-Rockingham, kunye nolwandle olusezinyaweni zakho esiluthandayo, kwaye siyathemba ukuba nawe uyakwenza.
Siyayithanda ibalcony ngokuthatha ivibrancy kunye nelanga ngelixa sonwabele isiselo esimnandi kunye.
Indawo yokupaka ikwisiza; Indawo yokuhlamba impahla ibonelelwe kakuhle ngokuvaswa, ukomiswa kunye neendawo zokuayina ezisemgangathweni.
Ikhitshi i-ultra-modern kunye neebhentshi zamatye kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko. I-Apartment ixhotyiswe kakhulu nge-air conditioning kunye nokufudumeza ukuthuthuzelwa kwakho.
Iiflethi ezisecaleni kolwandle zonwabela indawo ekhuselekileyo enevidiyo yokubeka iliso / inkqubo yokungena: ilungele abo bahamba bodwa.
Le ndawo idityaniswe kakuhle kakhulu. Uqhagamshelo lwendlela olukufuphi lukusa kwiKwinana Freeway, okukuvumela ukuba ube kwi-Perth CBD ngemizuzu engama-50. Ngokufanayo, uhambo olufutshane ukuya eFremantle okanye eMandurah lunokwenziwa ukonwabela imbali yaselwandle, ulwakhiwo lwezakhiwo okanye ulwandle oluhle.
Indawo ethandekayo enentloko kunye neRockingham Beach, ulwandle kunye neembono ezingqongileyo kwimozulu entle. Kuyaphumla kakhulu ukuhambahamba kwaye ubambe isiselo kwenye yeevenkile zekofu kwaye ungene kwindawo yokubona. Yonwabela!
Umbuki zindwendwe ngu- Liam
Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha ngexesha lokuhlala kwakho nathi, ukuqinisekisa ukuba ufumana okona kulungileyo kwigumbi lethu kunye neRockingham ngokubanzi. Nceda usibuze iingcebiso malunga nokuba ungabamba ukuluma okanye uye kusela, iingcebiso zabakhenkethi.
Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha ngexesha lokuhlala kwakho nathi, ukuqinisekisa ukuba ufumana okona kulungileyo kwigumbi lethu kunye neRockingham ngokubanzi. Nceda usibuze iingce…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rockingham